I-Social Buzz Club: Yabelana futhi Wabelane | Martech Zone
Enye yezinto ezinhle zokuhambela ingqungquthela efana neSocial Media Marketing World ukuthi ushiya ukunethezeka kwenethiwekhi yakho bese ufaka abanye abaningi. Akunandaba nosayizi wenethiwekhi yakho, uvame ukukhawulelwa kuzindaba nolwazi olwabiwe ngaphakathi. Ukuya engqungqutheleni yomhlaba efana nalena kukuvulela amanethiwekhi amasha kakhulu. Sihlangane nabantu abaningi eSan Diego futhi sizoqhubeka nokubhala ngabantu nangobuchwepheshe esibutholile.
Obunye bobuchwepheshe obunjalo ngu Iklabhu ye-Buzz yomphakathi. Sijoyine iklabhu ngokushesha, saba ngamanxusa, futhi sizoqala ukusebenza eduze neqembu lapho. Yini iSocial Buzz Club?
Esikhathini esithile esidlule, abangane ababili kanye nozakwabo bezokumaketha ezinkundleni zokuxhumana bebekhuluma ngokuthi bangasebenzisana kanjani futhi basizane ekusabalaliseni izindaba ngamakhasimende abo amasha. Omunye wayeneklayenti elisha ayesebenzisana nalo futhi adinga ukuthola ukuvezwa okuthile, kanti omunye wayeyisibonelelo esasisebenza umkhankaso futhi esidinga nokuvezwa ukuze kwandiswe iminikelo. Bebazi ukuthi amaklayenti awasenelisekile ngenani labalandeli nabalandeli, konke bekungokubuyiswa kotshalo-mali (i-ROI). Amaklayenti ayefuna ukubona imiphakathi yawo isebenza, ethumela ithrafikhi kumawebhusayithi awo, empeleni ewaguqula abe ngamakhasimende noma abanikeli.
Bavumile ukuthi lokhu bekuyinselelo futhi bacabanga ukuthi mhlawumbe akubona bodwa abanenselelo efanayo. Bese bethi “uma?” Kuthiwani uma inethiwekhi yokubambisana yokumaketha ingahle ibe nabasebenza emkhakheni wezokuxhumana nakwezokumaketha online, ngenhloso eyodwa yokusabalalisa igama ngamabhizinisi omunye nomunye noma amaklayenti ngendlela eyiqiniso, enhle? Lokhu kuzokwengeza ukufinyelela komyalezo weklayenti futhi kukhuthaze ukwabiwa kokuqukethwe kwekhwalithi kuzinkundla zokuxhumana. Kuthiwani uma bekusethwe ukuze okuqukethwe kube komhlaba jikelele noma okwasendaweni, ngaleyo ndlela kukhuliswe inani lamathemba aqondisiwe - kwandise i-ROI yamakhasimende? Okungcono kakhulu, kuthiwani uma amalungu angabelana ngokuqukethwe kwawo, futhi azitholele ukuzivezela?
Umqondo we iklabhu ye-buzz yomphakathi wazalwa. Viola! impumelelo ngokubambisana!
NGABE LOKHU UBUZZ UMAZE NGANI?
The Iklabhu ye-Buzz yomphakathi ixazulula inkinga futhi inika amandla abanikazi bamabhizinisi be-savvy media media, izinzuzo zokumaketha imidiya yokuxhumana nabantu, kanye nabaluleki bezentengiso abaku-inthanethi ithuba lokuba ngabakhi be-brand buzz ngohlelo lokuqala lokuhlanganyela lokuhlanganyela emhlabeni. Njengoba ukwabelana kususelwa ekubuyiselaneni, ilunga ngalinye linikeza kuqala. Lokho kusho ukuthi ukukhipha igama mayelana nemikhiqizo emikhulu ekuqondanisweni namanethiwekhi abo emvelo kuyinto eza kuqala kuqala yilungu ngalinye .. Ngamanye amagama, okuqukethwe kwamakhasimende akho kuzothuthukiselwa ukukhomba izethameli. Lapho ilungu selitholile amaphuzu anele ngokwabelana ngokuqukethwe okuqondisiwe, khona-ke linganikela ngokuqukethwe kwamakhasimende alo echibini. Lokhu kuqinisekisa ukuthi wonke umuntu wabelana ngokuqukethwe futhi iklabhu lingamandla amakhulu ekwakheni i-buzz mayelana nemikhiqizo okungeyakho noma oyisebenzelayo.
Uma usungenile ngemvume, uhlangane nohlu lokuqukethwe ongabelana ngakho futhi udale amaphuzu. Engikuthokozelayo ngomkhiqizo yizinga elilinganiselwe lokuhlunga engingalisebenzisa kanye nekhwalithi yokuqukethwe engikwabelanayo. Le akuyona injini ezenzakalelayo ephonsa noma yini kunethiwekhi yethu. Ngiyakwazi ukufunda, ngigobe futhi ngabelane ngokuqukethwe engikholelwa ukuthi kuyigugu ezilalelini zami.
Tags: FacebookLinkedInukuphindiselaUkwabelanaiklabhu ye-buzz yomphakathiukhubekeTwitter